Moments Neshamwari 63
Haisi iyo dzidziso yeTheosophika yekutambura kwedu pasi pano se karmic retribution, maererano neTheological statement yekutambudzika kwedu sekudzorera mugehena, mune izvo zvese zvinotaurwa zvinofanirwa kugamuchirwa nekutenda chete; uye, mberi, imwe inenge yakaita seyeye kuti iite tsika dzakanaka?
Dzidziso dzese dziri muchikamu, uye dzinofanira kutorwa pakutenda chete apo pfungwa dziri muchinhu chisinga fungidzike kana chemwana. Dzidziso dzinogamuchirwa, zvakafanana sezvo mavara uye tafura yekuwedzera inotorwa nemwana - pakutenda.
Kana iyo pfungwa yekufunga ikaongorora dzidziso, inowana kuti kutambudzika pasi pano kwakavakirwa pamutemo nekururamisira uye kunoratidzwa neruzivo muhupenyu, uye kuti dzidziso yegehena mutemo wekupokana wakarongedzwa nehurongwa hwebhaibheri. Pfungwa haigone kuwana chikonzero chekutambura kusingaperi mugehena sekutsiva kwezvakaipa zvakaitwa zvakanyanya nekusaziva muhupenyu hupfupi hwepanyika, kunyanya kana zvakaipa zvacho zvichiratidzika zvichimanikidzwa kazhinji nekumanikidzwa kwemamiriro ezvinhu nenzvimbo, izvo zvisina kukonzerwa nemurwere.
Kuberekwazve, uye kutambudzika pasi pano sekudzorera karmic, kana ikashandiswa kutsanangura chokwadi chehupenyu, inowanikwa ichishanda maererano nemutemo, zvakafanana netafura yekuwedzera uye arithmetic. Kutambudzika kunoonekwa semhedzisiro yekuita zvakapesana nemutemo, uye kusiri kurangwa, asi chiitiko chakakosha pakudzidza kuti usadaro. Izvo zvine mbiri kune kungwara kuti nyika uye nzvimbo yemunhu mariri mhedzisiro yemutemo kwete mhedzisiro yeiyo whim yedhisot.
Dzidziso yezvouMwari yegehena haigoni kunyats kutaurwa nezvakanaka sedzidziso yeiyo dzidziso yekudzora karmic, kubereka hunhu, nekuti hunhu harungambozvarwa nekusatya. Dzidziso yegehena ndeyekumanikidza kunaka kuburikidza nekutya kurangwa. Panzvimbo pezvo inochengetedza hutsinye hunhu uye inoratidza chiito chisina kuringana.
Dzidziso yekudzorera karmic kuburikidza nekuzvarwa patsva, inobatsira pfungwa kuwana kwayo nzvimbo uye kushanda munyika, uye inoratidza iyo yechokwadi nzira kuburikidza nehupenyu. Kunaka kwetsika ndiwo mugumo.
Iko hakuna humbowo kwegehena kwedzidziso. Pfungwa yeruramisiro inopandukira uye inodzinga kutya kwayo sezvo pfungwa dzichikura musimba nekunzwisisa. Chiratidzo cheKarma ipfungwa yeruramisiro inowanikwa mumunhu. Kukwanisa kuzviona uye kuzvinzwisisa, zvinoenderana nekuda kwake kuona zvakaipa zvake uye kuzvigadzirisa nekungoita.